Nezvedu | Linqing Meifule nemazvo Kupa Co., Ltd.
Yakakwira Ball Kubereka Units
Linqing Meifule nemazvo Kupa Co., Ltd.
Guantao kudada kunotakura kugadzira co., Ltd.
(LINQING MEIFULE PRECISION KUITIRA CO., LTD) yakasimbiswa muna 2005, uye inonyanya kubudisa yakadzika groove bhora mabheyaringi, piro block uye taper roller mabheyaringi. Zvakare inogona kuita akakosha mabheyari maererano nemutengi kudhirowa kana sampuro. Iyo fekitori ikozvino iri munzvimbo inobereka maindasitiri e. Iyo yese maindasitiri nzvimbo inovhara 80000 mativi emamirimita uye ive yavo yakazara inobereka yekugadzira cheni, iyo inogona kuchengetedza mutengo wekugadzira uye kubatsira mune yakakosha chiito
Iyo fekitori inotanga kutumira kunze zvakananga kubva ku2015 uye yakavaka iyo yekurasira kambani (XIAMEN KUDADA MABEREKI CO., LTD) yekugadzira yakanakisa sevhisi yekutengesa. Boka rekutengesa rine vashandi vane ruzivo uye nemitemo yakanaka yehupfumi muXiamen guta. Uye wozogadzira cheni yakakwana kubva mukugadzira, kutengesa uye mushure mekutengesa chiito.
Kubva pane yekugadzira technic uye ruzivo rwekuita yakadzika groove bhora mabheyaringi, iyo fekitori inotanga kuburitsa mutsago block muna 2010. Kubva mbishi simbi nesimbi zvinhu kune iyo casted dzimba uye apedza mabheyaringi, takatonga kwakasimba kugadzirwa uye kuongorora maitiro kusvika tichichengeta kune imba yekuchengetera kutumira. Wobva waita chokwadi chekumhanya kunogutsa kumushandisi. Uye munhu wedu wese wekutengesa anofanirwa kuve neruzivo rwehunyanzvi hwebheyari uye mechiniki munda, ipapo anogona kupa zano rakanaka kumutengi uye kudzikisa mutengo zvakanyanya.
Zvigadzirwa edu kunyanya sezvo pazasi
Isu takakoshesa ruzivo rwese uye nekufambira mberi nguva dzose aya makore uye ikozvino tave kunyanya nyanzvi mukutakura mutsara.
1. Yuniti inobereka UC, UK, SA, SB, ye200 uye 300 dzakateedzana
2. Kanda simbi dzimba P, F, FL, T, FA, FB, FC, HA zvichingodaro
3. Yakadzika groove bhora rinotakura (diki saizi uye yepakati saizi) mu inch kana metric
4. Taper roller inotakura in inch uye metric akateedzana (mhando pamusoro P0 - P6 giredhi)
Zvichienderana nekuvimbika uye kuvimbika, kuchengetedza mhando kutanga iri bhizinesi bumbiro redu.
Ticha chengeta nekukudza musika wedu nemhando yepamusoro, mutengo uye sevhisi. Tinoda kutungamira zvakanyanya uye kukura zvakanyanya uye zvakanyanya mundima yekutakura.
Tinogamuchira nemoyo wese vatengi vanokosheswa vanochengeta kubatana kwakavimbika nesu.
Yandian Town Linqing Guta Shandong Dunhu